निर्मला पन्त को हत्यारा पत्ता लगाउन गाउकै डीएनए जाच्ने ? – Rastriyapatrika
निर्मला पन्त को हत्यारा पत्ता लगाउन गाउकै डीएनए जाच्ने ?
२८ मंसिर, काठमाडौं । निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणले प्रहरीमाथि विश्वासको संकट सिर्जना गरेको छ । प्रहरी अनुसन्धानमाथि सर्वसाधारणले भर गर्न छाडेका छन् ।
अब ‘डीएनए’ लाई नै अन्तिम अस्त्र मान्न थालिएको छ । तर, डीएनएको वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।तथापि, अहिलेसम्म प्रहरीसँग अपराधी पत्ता लगाउने आधार एउटै मात्र छ– निर्मलाको ‘भजाइनल स्वाव’ मा भेटिएको डीएनए ।
कसरी सङ्कलन भयो ‘स्वाव’ ?
घटनास्थलमा निर्मलाको सुरुवाल पर्खाल्दै महिला प्रहरी । घटनास्थलबाट प्रमाण संकलन कार्य सकिएपछि मुचुल्का उठाएर पानीमा भएको शवलाई निकालेर महाकाली अञ्चल अस्पतालमा पोष्टमार्टमका लागि पुर्‍याइयो । अनि, पोस्टमार्टमका क्रममा निर्मलाको ‘भजाइनल स्वाब’ निकालियो ।
गुप्ताङ्गमा निर्मलाको कपडा राखिदिए पनि मुख्य प्रमाण ‘भजाइनल स्वाब’ भने नष्ट हुन नपाएको प्राविधिकहरुको दाबी छ । किनकि, यो स्वाब बाहिरी भागबाट नभएर गुप्ताङ्गको भित्री पाटोबाट निकालिने हो प्रमाणीकरणका लागि १० वटा सर्तमध्ये ३ वटा सर्त मुख्य मानिन्छन् । तीनमध्ये कुनै एक पूरा नभएको खण्डमा नमूनालाई फिर्ता पठाइन्छ ।
गम्भीर लारबाही त के भयो भने घटनास्थलबाट सबुत उठाएर मुचुल्का गरिसकेको २२ दिनपछि थप प्रमाण उठाएको भेटियो । यसले प्रहरीले कुन हदसम्मको लापरबाही गरेको थियो भन्ने पनि देखाउँछ यो जिज्ञासाको समाधान खोज्न पहिले ‘स्वाव’ निकाल्ने चिकित्सकहरुतिरै प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, उनीहरुमाथि अहिलेसम्म अनुसन्धान अधिकारीहरुले प्रश्न तेस्र्याएकै छैनन् । न त अस्पतालले आफ्नो आधिकारिक धारणा नै सार्वजनिक गरेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस निर्मलाका हत्याराको खोजीः बाटोमा जसलाई भेट्यो, उहीमाथि शंका ! डीएनए ‘रिभ्यु’ गर्नु आवश्यक